Ukuqalisa ubomi ingcebiso besoyika ukuba wenze okuphosakeleyo isigqibo – Njani ukwenza isigqibo. Isigqibo inkxaso kuba izigqibo ezinzima, Kutheni ngamanye amaxesha, enze isigqibo. Oko unako singenza ntoni ukuze kuphunyezwe kwezigqibo nkqubo. Oko kwenza ukuba ayoyika ukwenza izigqibo. Oko kwenza ukuba awunokwazi isigqibo. Impendulo kwezi imibuzo ingafunyanwa kwi oku ngeposi. Umfanekiso Fotolia Zethu ubomi ke indlela paved kunye izigqibo. Kukho omkhulu kwaye ezincinane, ukukhanya kunye nzima izigqibo, sino ukwenza. Sino lokugqiba ukufumana atshate okanye ukuphila njengoko Enye, kuba abantwana okanye ahlale childless, ukusa kweli lizwe okanye ohlala kwisixeko, ukwakha indlu okanye kukrazulwa yakho apartment, njalo-njalo. itshintshe ubomi iimeko ezifana umhlala-phantsi, ukufa a iqabane lakho, okanye impilo wokubandezeleka, kuya kufuna ixesha kwaye kwakhona, bethu indlela ubomi ukuba adapt kwaye enze izigqibo. Isigqibo ukuze sibe libazisa okanye hayi ingaba isigqibo – umzekelo, isigqibo ukushiya yonke into njengoko kunjalo. Abanye abantu ukufumana lula lokugqiba, abanye hamba, ngokulandelelanayo, iintsuku, iinyanga okanye nkqu iminyaka to get pregnant, ude ube ukwenza isigqibo. Kuba abantu abaninzi, kubalulekile waqwalasela okokuba baya kwenza ubudala kwaye inzima ngakumbi ukwenza izigqibo. Izigqibo ingaba ke ngokulula, ukuba omnye Enye ngokucacileyo sele okuninzi ngakumbi ngaphezu komnye. Isigqibo ngoko ke, nzima, ukuba ngamnye Enye sele ezithile okuninzi, kwaye akukho nanye kwezi izibonelelo ngokucacileyo ngcono. Akukho ndlela ikhethekileyo. Ukuba akukho ndlela ikhethekileyo, ngoko ke Fears nokuza phezulu, singathi enze okuphosakeleyo isigqibo, kuba nathi thabatha zoko. Kwimeko izigqibo ukuba kuza kuba nzima kuba nathi, thina rhoqo encounter i-seemingly safest oyikhethileyo: Thina opt kuba Enye silindele noko thabatha zoko secaleni. Umzekelo, ukuba ngaba phakathi nemisebenzi ebaluleke kakhulu ukukhetha unomdla zombini, i – e-artistic entsimini, enye kwi-banking, ngoko ke ezininzi imibandela e ukudlala kwi – (echanekileyo) ukukhetha indima enkulu. Umsebenzi kwi-banking candelo ingaba na isithembiso a zikhuselekile kwaye mhlawumbi nkqu eliphezulu ingeniso, Umsebenzi kwi-artistic entsimini. Ukuba mali ukhuseleko kakhulu ebalulekileyo kuwe, usenza mhlawumbi kuba i-banking kwicandelo lezolimo. Inokuba financially elungileyo oyikhethileyo. Mhlawumbi ufuna ukuza kodwa emva kwiminyaka embalwa banking ukuba painful realization ukuba Bank Ujob boring, ngesehlo soxinezelelo kwixesha kwaye unsatisfactory. Ngaba earn kulungile, kodwa ixabiso ngu phezulu. Babeya kakhulu ukuphila ngaphandle yakho artistic icala.
Ngoko ke ekhuselekileyo oyikhethileyo waba ngokomthetho personal satisfaction ye-umsebenzi, kodwa ekugqibeleni na elungileyo oyikhethileyo. TIP: zibuze nokuba ingaba ngenene malunga ubomi nokufa. bekuya kuba ngenene a intlekele, ukuba isigqibo sakho kuvavanya ukuba abe ezingachanekanga. Indlela ayikwazi yiya ubomi bakho. TIP: Ukuba ufuna bakholisa ukuba abe secaleni (khangela umzekelo ngasentla), ngoko ke zibuze: ndim (mali) ukhuseleko ingaba ngenene ngoko ke kubalulekile ukuba ndinqwenela ukuthatha personal disadvantages okanye satisfaction wam personal inclinations kwaye umdla kukuba ngakumbi ebalulekileyo kum. TIP: Thetha neqabane lakho abahlobo – eyona kunye enjalo, isigqibo uvuye. Ngale ndlela, uyakwazi wear ngakumbi iimpikiswano kuba kwaye ngokuchasene isigqibo. TIP: nayo Eluncedo kwi-zimvo kuba kwaye ngokuchasene isigqibo kwi zimbini iicolumn, bhala phantsi elandelayo ngamnye omnye, kwaye kwangoko, ngokusebenzisa ukubala, nokuba ngaba iimpikiswano kuba okanye ngokuchasene nawo outweigh. TIP: Ukulindela ukuba akukho absolutely ilungelo izigqibo. Ngaba abakho clairvoyant kwaye ayikwazi bona bangena elizayo. Ayilunganga izigqibo ingaba inevitable, ngenxa yokuba thina zange kuba zonke iinkcukacha kuba ilungelo isigqibo. Naziphi na (kanti ke echanekileyo) isigqibo sele kunye kwaye thabatha zoko kuba zethu kakuhle-ntle kwaye zethu satisfaction. TIP: Ukuba ukhe wenza isigqibo, animelanga ukuba wenze oku ngonaphakade kwakhona kulo mbuzo. Uthi ukuba ngokwakho internally: yeka. Mna kuba wayecinga ngokusebenzisa bonke iimpikiswano, kwaye ndiya umthetho ngoku. TIP: Xolela ngokwakho, ukuba isigqibo kwi-hindsight, njengoko unfavourable okanye engalunganga. Uthi: andinayo wenza isigqibo lightly. Zonke ndinga nizise kwi amava, ndandicinga. Mna sayenza wam Eyona ukwenza ilungelo isigqibo. Mna andinaku khangela elizayo kwaye zonke zoko lomthetho isigqibo ngokupheleleyo hlola. Andisoze cinga ngoku, njani ndenze Eyona ngaphandle Imeko. Ndinqwenela ufuna ukomelela ukwenza ilungelo izigqibo kwaye isibindi ukwamkela abo bathe kwacacisa kwi-retrospect ukuba abe unfavorable. Ndiyabulela kuba zilandelayo kwam Ixesha lakho ihlawulwe. Ukususela kwiminyaka ndiza ekuncedeni abantu ukumelana kunye personal iingxaki. Ukulingana yam elinolwazi umsebenzi, mna fumana Nordic Ehamba, Meditation, Jin Shin Jyutsu kwaye baking ka-okumnandi cakes, biscuits kwaye pastries. Molo Ugq Wolf, ndiza emi kwi-phambili elikhulu kakhulu isigqibo, intshukumo ukusuka Emntla ukuya e-afrika Sasejamani emva kweminyaka Emntla ntshona. Ndinguye ubudala kwaye ndiza ukusuka e-afrika Germany. Izakuba olugqityiweyo inyama qala. ‘ve ukufunda ezinye yakho kwezigqibo AIDS, kwaye ukufumana kwabo eluncedo.
Ndine inzala kwi-Kwincwadana.
MfG Sigrun, ndijonge phambili ku-a stimulus. Kusenokuba”abanye”kuba okulungileyo”umcebisi”kwaye”umncedi”, kodwa nkqu ndinako isigqibo, ngamanye amaxesha, kunzima motivate okanye Apho ngaba iifayili kunjalo, ukuba ukhe wenza isigqibo, ngoko ke baqonde ukuba ufuna amadoda ebalulekileyo incopho, kuba abanye isizathu akakwazi kuzisa, isigqibo lomphathi ukwenza. umzekelo, kwimeko a nokuzinikela kuba i-apartment, ngenxa ixesha koxinzelelo, hayi zonke afanelekileyo amanqaku ayikwazi kuqinisekiswa. Ukutsiba kwindawo Enye, kunzima: hayi ke kakhulu, ngenxa yokuba kufuneka _imaphu yesigingqi kwi umntu kwi intloko, kodwa ngenxa yokoyika kukuba Enye kanjalo bonke of a sudden non-trivial drawback kukuba ubune ngaphambili overlooked. Mna ukufumana inqaku eluncedo kakhulu, kodwa kubaluleke ngenene nzima ukwenza izigqibo, wonke ngokubhekiselele (nokuba ngasese okanye professionally. Ukwenza isigqibo kanjalo kuthetha tshintsha, nokuba dibanisa okanye uthabatha. LG ngaphandle Kwelizwe Brandenburg, ndathola le ncwadi ukususela wam therapist elicetyiswayo, ngenxa ngemiba depression, anxiety, perfectionism, kwaye unako kuphela kuthi – mna bayibize wam lobuqu Lwebhayibhile. Ndine lunxulumano ngoko ke rhoqo kule ncwadi kwaye ukuba yedwa sele bandinceda kakhulu. Mna recommend yam patients, ii-pal guide, ngenxa yokuba banawo ebalulekileyo ulwazi a therapy supportive indlela. Kwi-ulinde therapy ndawo, iincwadi ziindleko ezinkulu uncedo. Ndiyabulela kuba yakho ndwendwela.
Kuba mnandi mini
Ithemba ukubona kuwe kamsinya kwakhona
Abahlobo kuba unxibelelwano kwaye hayi nje →